Izinwele eziphilileyo kunye ezintle ziphupha elixabisekileyo lazo zonke izinto zesini. Unokuba nelinen ecocekileyo kunye nomfanekiso omhle. Nangona kunjalo, ukuba iinwele zinengxaki ecacileyo, ukuqala kweso siba yinto emnandi kwaye ayikhunjulwayo kunye nomqondiso osisigxina - ukunyanyeka okuncane, kunye nesiginci esincinci.
Kwaye ngokuthe ngqo. Unokuhlala ujonga amantombazana kunye nabasetyhini abaneenwele ezimnandi, ezizilungele kakuhle, ezingenangqungquthela, kodwa bengenanto yokubumba. Yaye ingcamango ibaluleke kakhulu, ikhangelekile kwaye ibumnandi.
Inkcubeko nganye ineemfihlelo zayo zobuhle kunye nempilo. Into enokuvela, into ayikho. Nangona kunjalo, ukufumana iindlela zokupheka ezahlukeneyo yindlela enhle yokufumana amava amatsha ekunyamekeleni ubuhle bakho kwaye uhlakulele eyakho, inkqubo efanelekileyo efanelekileyo.
I-culture yeVedic inamava eneminyaka eyiwaka kwimimandla eyahlukeneyo yobomi, kuquka nokunyamekela ubuhle kunye nempilo yomzimba womntu. Izinwele zidlala indima enkulu apha. Ngubo abaxhasa ukulinganisa ulwazi lwamandla ebomini bomntu kwaye babonakalisa amandla amakhulu kunye nobuqili. Ngokuncediswa unyango olufanelekileyo lweenwele, unokukwazi nokuba nefuthe elihle kumntu osondelene nomntu othandekayo, ukukhusela ebomini bakhe iingxaki ezininzi nezifo.
Ukuba uziva uxinzelelo okanye uvakalelwa kukuba ungeyonto efanelekileyo, indlela efanelekileyo kukuhlamba inwele zakho. Emva kwakho konke, iinwele kwizinga lamandla liyakuthintela yonke into eyenzekayo emini, kwaye ke, ukubonakala okubi, iimvakalelo ezingamnandi kunye namazwi angenabuhlungu.
Ukuba unentloko kunye nokuphazamiseka kwengqondo, zenze i-massage yekhanda, hlamba iinwele zakho kwaye ujonge ingcamango yakho kwisibuko-kuba ihlabathi liye lachaphazeleka kakhulu, kwaye iingcamango ezibuhlungu zinyamalale ndawo ndawo, akunjalo?
Izinwele zinemihlaba yemilingo. Emva koko, bazigcina ngokwabo ulwazi olunzulu malunga nomntu nobomi bakhe ukususela ekuzalweni. Izinwele zakho, nokuba ziphi na, zihlala zixhunyaniswe nawe ngentambo engenakulinganiswa. Ngoko ke, awukwazi nje ukuphosa inwele zakho kwiinkunkuma, uyifake ngaphakathi kwindlu yangasese uze ushiye e-hairdresser's. Awukwazi ukuba nabo badibana nobuncwane kunye neengcola. Nabani na onesityana esincinci seenwele zakho, unokukwenza nawe izinto ezininzi ezingathandekiyo: ezivela kwizifo eziza kutshabalalisa.
Into engeyona nto inobungozi eyenzekayo xa iinwele zakho zingatshitshisi, kodwa ukulala kwenye indawo phakathi kwerubhi okanye kwiintaka zeentaka, kukuhla kwezinto ezinobunzima, ukuxhalabisa, ukuphathwa kwentloko, kunye neengxaki kunye neziganeko ezingekho phantsi kwempilo. Ukuqoqa iinwele zakho kwisikhwama sodwa uze uyitshise. Ngoko unokuzikhusela kumgangatho wamandla kwiinkalo ezininzi ezingenasidingo kunoma ubani.
Kwiinkcubeko zeVedic kukholelwa ukuba iinwele kufuneka ukuba zide. Ubuncinane ubude buphakathi kweendawo. Ngexesha elide iinwele zabesetyhini, ezinamandla kwaye zisebenzayo ikosikazi yazo zinako ukuqhuba impembelelo enhle kwihlabathi elijikelezile, ngokusondelene ngokubanzi kunye namandla amakhulu, ukunika uthando kunye nemvakalelo emihle kubo bonke abasondeleyo kunye nabantu abasondeleyo.
Iingcali kwi-Vedic culture zikholelwa ukuba ukuxhalabisa malunga neenwele ezincinci, ezinobuthakathaka zingenangqondo kwaye zingenasiphelo. Nawuphi na umfazi kufuneka abe neenwele ezinde. Kule nto kuxhomekeke kumgangatho wobomi bakhe.
Izinwele ezinde ukuba zijongane naluphi na ubulili obufanelekileyo. Kubalulekile ukukhetha iinwele ezilungileyo. Akuyimfuneko ukuba zonke iinwele zibude obufanayo. Kubalulekile ukuba ubuncinci babo bafikelele emagxeni. Kwaye indlela, inwele efanelekileyo yindlela efanelekileyo yokuphumeza amandla. Ngoko ke ukhetho oluhle kakhulu lude, luncinci, luboya.
Ngenhlanhla ukuba ubuhle bemihla ngemihla kaninzi bembatha uboya bezinwele. Oku kuthathwa njengento engalunganga kwintlalo yeVedic, kuba amandla anqabileyo achitha kwaye achithe. Dissolve izinwele kufuneka zibe phambi kwendoda ethandekayo okanye kwiimeko apho ufuna ukuqinisa, ukukhumbuleka umntu.
Enye yeemfihlelo zokusetyenziswa kwamandla kweenwele - ukuba unomcimbi obalulekileyo wezoshishino, okanye uqhelana nomntu othakazelisayo, zama ixesha elide kunokwenzeka ukuba unxibe iinwele ezivunyiweyo kwaye kuphela ngexesha elibaluleke kakhulu nelona libalaseleyo, uzinqamle. Amandla aqokelelweyo aya kukuzisa inhlanhla kunye nemiphumo emihle kwimicimbi yezoqoqosho kunye nemicimbi yothando.
Enye yezinwele zezona zinto ziphumelele kwaye zichanekile zibeka - i-braid. Inesiphumo esinenzuzo kwiinwele kwaye ibancedisa ukukhula ngokukhawuleza nangokukhawuleza.
Kubaluleke kakhulu njengoko wenza isahlulo entloko yakho. Iiklasi - inxalenye eqondileyo. Ukuba ukhathele kunye nemvakalelo kwindawo ephezulu yokubilisa, yenza ulwahlulo olunqamlekileyo kwaye ubophe izinwele kwi-bun. Ikhwele enjalo, eyenziwe isikhashana, iya kukunceda ukuba uphinde uphucule, ukuphucula isimo sakho sengqondo, ukongeza ubungqina kunye namandla. Ukuba unqwenela ukwenza ukwahlula kwicala, ngokuqinisekileyo kufanele kube ngileyo, kwaye uninzi lweenwele ludibaniswe kwicala lasekhohlo.
Ubuhle nempilo kuwe nakwezinwele zakho.
Iilungiso zomntu zezinwele
Konke malunga nokwandiswa kweenwele zeerbbon
Indlela yokujongana ngokufanelekileyo neenwele ezimpunga
Indlela yokunyamekela iinwele ebusika?
Iidraphi zokupheka iigwele ezizenzela
Kutheni umntwana engalali kakuhle ebusuku?
Sadibana nosana olutsha kunye neenaliti ezinamaqhina - isethi ngezandla zethu
I-Narcissism okanye uthando?
Igadi kunye nomyezo
Ukulahlekelwa kwesisindo ngaphandle kokuvinjelwa ukutya: ukutya okunciphisa ama-60
Inendima ye-carbohydrate kwisondlo
Uluhlaza kwintyatyambo kwi-batter
U-Natalia Sturm wayekhohliswa ngobuqhetseba kwinkqubo kaShepeleva